सावधान ! सुर्तीजन्य सेवन गर्ने मानिसहरुलाई जोखिम कोरोना सर्न सक्ने र मृत्युको सम्भावना बढी हुन्छ – विश्व स्वास्थ्य संगठन – Khabar PatrikaNp
सावधान ! सुर्तीजन्य सेवन गर्ने मानिसहरुलाई जोखिम कोरोना सर्न सक्ने र मृत्युको सम्भावना बढी हुन्छ – विश्व स्वास्थ्य संगठन
July 25, 2020 233
के तपाईंको बच्चालाई कुनै खाने कुरा दिँदा चिलाउने डाबर आएको छ? खाने कुराले गर्दा सास फेर्न गाह्रो हुने वा बेहोस हुने जस्ता गम्भीर समस्या देखिएको छ? अनि तपाईंले कुनै खानेकुरा एलर्जी हुन्छ भनेर बार्ने गर्नु भएको छ?
धेरै जसो मानिसमा एलर्जी हुने खानेकुरामा बदाम पर्छ। त्यस्तै दूध वा दूधबाट बन्ने परिकारले पनि बच्चाहरुमा एलर्जी हुनसक्छ। अन्डा, माछा, मासु, गहुँ, भटमास आदि साधारणतया एलर्जी गराउने खानेकुरामा पर्छन्। कतिपय तयारी खानेकुरामा भएको कुनै पदार्थको एलर्जी भएर त्यो खाना खाने बित्तिकै असर देखिने पनि हुन्छ।
बच्चामा कुन कुन खाने कुराले एलर्जी गर्छ भन्ने थाहा भयो भने साबधानी अपनाउन सकिन्छ। त्यस्तै एलर्जी भइहालेमा के गर्ने भन्ने थाहा पाउनु पर्छ। एलर्जी हुने खाने कुरा हटाएर बच्चाको पोषण कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने कुरामा पनि त्यसले सहयोग गर्छ।
खानेकुराको एलर्जी धेरै जनालाई हुन्छ। अमेरिकाको तथ्यांक हेर्ने हो भने अठार वर्ष मुनिका प्रत्येक तेह्र जना बालबालिकामध्ये एक जनालाई कुनै न कुनै खानेकुराको एलर्जी देखिएको थियो। बयस्कको तुलनामा बच्चाहरुमा एलर्जी बढी देखिन्छ।
खाना वा कुनै कुराको एलर्जी हुनु भनेको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले उक्त पदार्थलाई किटाणु जस्तै बाहिरी वस्तु ठानेर त्यस बिरुद्द अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दिनु हो। तर उक्त प्रतिक्रियाले गर्दा आफ्नै शरीरलाई नै हानी पुग्दछ। उदाहरणका लागि, तपाईंको हातमा एउटा झिंगा बस्यो भने स्वाभाविक रुपमा तपाईं अर्को हातले हानेर भगाउन खोज्नु हुन्छ।
मानौं तपाईंले त्यो झिंगा मार्न चक्कुले हातमा बसिराखेको झिँगामाथि प्रहार गर्नुभयो। त्यस्तो अस्वाभाविक प्रतिक्रियले तपाईंको हातमा चोट पुग्छ। कुनै खानेकुरा खाँदा शरीरले विभिन्न लक्षण आउने गरी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया गर्‍यो भने त्यो खानेकुरासँग एलर्जी रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
एलर्जी हुने खाने कुरा जब अर्को पटक शरीरमा पुग्छ, पहिलो पटक खाँदा शरीरले बनाइ राखेको बिशेष प्रकारको एन्टीबडी तुरुन्तै सक्रिय भैइहाल्छ। त्यो खानेकुरा आफ्नो शत्रु हो जस्तो गरी शरीरले प्रतिक्रिया स्वरूप ‘हिस्टामिन’ नामको रसायन निकाल्छ जसले गर्दा विभिन्न खालका असर देखिन्छ। त्यस्तो असर खाना खाँदा वा कहिलेकाँही खानाले छुँदा वा सुंग्धा मात्रै पनि ५ मिनेट देखि एक घण्टा भित्रमा देखिन्छ।
एलर्जीका लक्षणहरु साधारणदेखि गम्भीरसम्म हुन्छन् र व्यक्ति व्यक्तिमा फरक हुन सक्छन्। एउटा व्यक्तिमा पनि एउटै खानेकुराको एलर्जीको लक्षण फरक फरक हुन सक्छ।
छालामा चिलाउने राता उठेका डाबर देखिनु एलर्जी हुँदा सबैभन्दा सामान्य र धेरै देखिने लक्षण हो। कहिलेकाही डाबरसँगै ओठ, जिब्रो, हात, खुट्टा सुन्निने, पेट दुख्ने, वान्ता हुने, पखाला लाग्ने पनि हुन्छ। स्वसप्रस्वासमा असर गर्दा खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, घ्यार-घ्यार हुनेहुन्छ। आँखा रातो हुने र चिलाउने, नाक बग्ने, घाटी खसखस हुने पनि एलर्जी कै लक्षण हुन्।
यी साधारण असरबाहेक कहिलेकाही बेहोस भएर ढल्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, सास फेर्दा आवाज आउने, सुन्निने, रक्तचाप कम हुने जस्ता गम्भीर असर पनि देखिन्छन् ‘येनाफाईल्याक्सिस’ भनिने एस्तो गम्भीर खालको एलर्जीको तुरुन्तै उपयुक्त उपचार गर्न नसक्दा ज्यान पनि जान सक्छ।
कुनै खानेकुरा खाएपछि देखिने असर सबै एलर्जी नै हो भन्न पनि मिल्दैन। कहिलेकाँही विषाक्त खानेकुराले ज्वरो आउने, झाडा पखाला हुने, पेट फुल्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् भने कहिलेकाँही पेट पोल्ने वा ढुस्स हुने, बढी पाद आउने, दिसा पातलो वा नपचे जस्तो हुने हुन्छ। यी प्रतिरक्षा प्रणालीसंग सम्बन्धित हुदैनन् र धेरै जसो घातक पनि हुदैनन्।
यदि तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको कुनै खानेकुरासंग एलर्जी छ जस्तो लाग्छ भने डाक्टरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। डाक्टरसँगको भेटमा बच्चालाई कुन कुन खानेकुरा दिदाँ कति बेरपछि र कति पटक कस्तो खालको लक्षण देखिएको हो र सकेसम्म त्यो खानेकुरामा के के कुरा मिसाइएको छ भन्ने विवरणसहितको डायरी साथमा भयो भने समस्या पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ।
परिवारमा कसैलाई कुनै खालको एलर्जी छ भने बच्चाको उक्त लक्षण एलर्जी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। डाक्टरले तपाईंको बच्चामा देखिएको लक्षण खानेकुराको एलर्जी नै हो वा अरु केही हो भनेर पत्ता लगाउन थप जाँच गर्न सक्छन्।
एलर्जीको लागि गर्न सकिने बिशेष जाँच भनेको छालामा सम्भावित एलर्जी गराउने कुराको प्रवेश गराउदा कत्रो डाबर आउँछ भनेर हेर्ने परीक्षण हो। यो भन्दा अलि कम प्रभावकारी जाँच चाहिँ रगतमा एलर्जी गराउने शंकास्पद खाना बिरुद्द शरीरले बनाएको बिशेष खालको रसायनको मात्रा परिक्षण गर्नु हो।
यी जाँचहरु महँगा मात्र हैन, नेपालमा सजिलै उपलब्ध पनि छैनन्। अर्को कुरा एलर्जी हुन सक्ने खानेकुरा चिन्न केही सहयोगी भए पनि यी जाँच धेरै उपयोगी नहुन पनि सक्छन् र एसको सहि विश्लेषण गर्न र उपचारमा सहयोगी हुनको लागि यसको नतिजालाई लक्षणसंग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
एलर्जीका विज्ञहरुले उपयुक्त स्थानमा होशियारी पूर्वक एलर्जी हुने शंका भएको खानेकुरा खुवाएर लक्षण देखिन्छ कि देखिदैन भनेर हेर्ने गर्छन्। यो बिधि कहिलेकाँही कुनै खाने कुराको एलर्जी छ छैन भनेर पत्ता लगाउन प्रयोग गरिए पनि धेरै जसो एलर्जी छ भनेर चिनिएको खानेकुरामा अझैसम्म एलर्जी हुन्छ की हुन्न भनेर पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ। किनकि कहिलेकाही एलर्जी हराएर पनि जाने हुन्छ।
खानेकुराको एलर्जी पूर्णतया निको पार्ने कुनै औषधि हुंदैन। यदि कुनै खानेकुराको एलर्जी छ भन्ने निर्क्योल भएमा त्यसलाई पूर्णरुपले बार्नु नै यसको समाधान हो। तर एलर्जीको लक्षण औषधी प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न भने सकिन्छ। यसको लागि डाक्टरको सल्लाहमा औषधी खुवाउनु पर्छ। साधारण लक्षणहरु केही दिनमा हराएर जान्छन्।
गम्भीर प्रकारको एलर्जीको लागि भने सुइबाट औषधी दिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता लक्षण देखियो भने तुरुन्त अस्पताल लैजानु पर्छ। येड्रीनालिन नामको औषधि बिरामी, अभिभावक वा शिक्षक आफैंले प्रयोग गर्न सक्ने खालको सुइमा पनि आउँछ जुन गम्भीर एलर्जी हुने बिरामीलाई कहिले र कसरी प्रयोग गर्ने भनेर डाक्टरले सिकाए बमोजिम प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा तुरुन्त उपचार नगरे ज्यान जान सक्ने भएकोले आफैंले उक्त औषधि लगाएर तुरुन्त अस्पताल लैजानु पर्छ। दुर्भाग्यवश त्यस्तो सुविधा नेपालमा सहज छैन। कम्तिमा चारदेखि छ घण्टासम्म त्यस्ता बिरामी स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा हुन जरुरी छ किनकि लक्षण फेरि पनि देखिन सक्छ।
कुनै खानेकुराको गम्भीर एलर्जी पहिला भएको छ भने उक्त कुरा खुल्ने खालको कार्ड वा ब्रासलेट साथमा राखिदिनु पर्छ र घर बाहिर खाना खानु पर्ने भएमा खाना बनाउने ठाउँमा कुन कुन कुराको एलर्जी छ भन्ने जानकारी दिन जरुरी हुन्छ।
खानेकुराको एलर्जी साधारणदेखि प्राणघातकसम्म हुने भएकाले तपाईं वा बच्चालाई यस्तो एलर्जी छ भने डाक्टरसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त योजना बनाउन र त्यसमा अडिग रहन निकै महत्वपुर्ण हुन्छ।
Prevएकै दिन थपिए यति धेरै संक्रमित, काठमाडौँको अवस्था खतरनाक बन्दै
Nextनेपालमा संक्रमितको संख्या १८ हजार ४८३ पुग्यो थप १०९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
यदि म कथं म मरे मेरो काजक्रियामा तिमी र मेरो भाई इमान सामेल नहुनु !!! यो मेरो बिन्ती !!! : नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामा